Ikhosi yeSayensi yeDatha -Funda ngePython, iPlotly kunye neLeaflet- iGeofumadas
Ikhaya/Izifundo ze-AulaGEO/Ikhosi yeSayensi yeDatha -Funda ngePython, iPlotly kunye neLeaflet
Okwangoku baninzi abanomdla kunyango lweedatha ezinkulu ukutolika okanye ukuthatha izigqibo ezichanekileyo kuzo zonke iindawo: ezendawo, ezentlalo okanye ezobuchwepheshe.
Xa ezi datha zivela mihla le zicazululwa, zitolikwa kwaye zazisiwe, ziguqulwa zibe lulwazi. Ukuboniswa kwedatha kunokuchazwa njengesixhobo sokwenza oopopayi, imizobo, okanye imifanekiso ngenjongo yokunxibelelana nomyalezo.
Le yikhosi yabathandi bokubonwa kwedatha. Icacisiwe ngemithambo esebenzayo yomxholo wangoku wokuqonda okungcono kunye nokusetyenziswa kwiiyure ezili-10 ezinzulu.
Intshayelelo ekubonisweni kwedatha
Iindidi zedatha kunye neentlobo zetshathi
Ukuboniswa kwedatha kwiPloti
Umboniso we-COVID kwiPloti
Idatha yendawo ekuyo kwisiqwenga somhlaba
Itshati yomsindo kaJohn
Imizobo yezenzululwazi kunye neenkcukacha-manani kunye noopopayi
Imephu ezisebenzisanayo ezinencwadana
Izakhono ezisisiseko zezibalo
Isisiseko esiphakathi kwizakhono zePython
I-GIS kunye nabasebenzisi beGeospatial
Iikhosi-zeGeospatial Iikhosi zeNkqubo